'रातो मृत मुक्ति 2' को सीरियल किलर उनीहरूलाई थार हिल्स - खेलहरूमा छ
घर	हरर मनोरन्जन समाचार	'रातो मृत मुक्ति 2' को उनीहरू थार हिल्समा सिरियल किलर छ
'रातो मृत मुक्ति 2' को उनीहरू थार हिल्समा सिरियल किलर छ
by ट्रे हिल्बर्न III नोभेम्बर 28, 2018
by ट्रे हिल्बर्न III नोभेम्बर 28, 2018 1,845 हेराइहरू
राम्रो माफ गर्नुहोस् यदि तपाईं, म जस्तो, अझै अझै पहाडहरू, उपत्यका र दलदल मार्फत MOSE हुनुहुन्छ रातो मृत मोचन 2, त्यसोभए तपाईलाई थाहा छ कि त्यहाँ धेरै थोरै पहाडहरू भेट्टाउने छ। ती आविष्कारहरू हिस्टेरिकलदेखि दाang्ग दायाँ चिलि toसम्म हुन्छन्।
यी मध्ये एक भेटेन्टिनेन्टको बाहिर मात्रै प्रारम्भिक थियो। मैले धेरै गिद्धहरू रुँदै गरेको देखे, र जाँच गर्ने निर्णय गरे। मैले पुलको संरचनाबाट उसको एक्सेपजेस र आन्द्राको छेउमा एउटा एक्लो धड झुण्डिएको पाए। एक शिर काटिएको टाउको एक पोल मा खम्बा लगाइएको थियो एक रोलिंग-अप नोटको साथ उनको अनुहारमा अडिग। अनरोलिंग पछि, मैले फेला पारे कि यो नक्शाको एउटा टुक्रा हो र यसको तल पुग्ने लक्ष्य लिएर अगाडि बढेको हो।
ती खेलहरूसँग पहिल्यै परिचित व्यक्तिहरूको लागि, तपाईंलाई थाँहा छ कि खुला विश्व freakin 'विशाल छ। तीन लाशहरूको लागि खोजी दुबै लत र घाँसकोटको स्थितिमा कुल सुई हो। यसले सहयोग गरेन, म स्थान अनलाइन हेर्दै विपक्षमा थिएँ। केहि गेमि situations स्थितिहरू अधिक इनामदायी हुन्छन् जब उनीहरूलाई जैविक रूपमा भेट्टाउँछन्, कम्तिमा यो मेरो लागि हो।
त्यसोभए, केहि विस्तृत खोज पछि मलाई दुई अन्य भयानक हत्या दृश्यहरूमा लगियो जुन पहिलो दर्पण हो। विभाजित निकाय र नक्शाको एक टुक्राले भरिएको एक काटिएको टाउकोको साथ प्रत्येक।
जब सँगै जोडिएको नक्शाले धेरै दुर्भाग्य पीडितहरूका टुक्राहरू भरिएको आँधीबेहरी तहखण्डतर्फ डो .्याउँछ। तहखाने गरीब आर्थर मोर्गन खोजी गर्दा मा snuck गरी बाहिर छ।
जब आर्थर ब्यूँझन्छ, स्लिम, स्लाइड, एडमन्ड लोरी जूनियर माथि उभिनु भएको छ आर्थरले आफ्नो घोषणापत्र, र उसले दुर्भाग्यपूर्ण काउबवायको लागि योजना गरेको कुराको वर्णन गर्दछ।
केहि द्रुत चालहरूको साथ, आर्थर टेबुलहरू घुमाउन सक्षम छ र कि त मार्न वा होग्टी एडमन्ड।
यो एक सुन्दर पक्ष क्वेस्ट हो जुन डराउने सम्बन्धित ईस्टर अण्डामा फैलिएको पहिलो थियो RDR2.
तपाईले ठोकर खाएको उत्तम ईस्टर अण्डा के हो? हामीलाई टिप्पणीहरूमा थाहा दिनुहोस्!
रातो मृत मोचन2अब जताततै बाहिर छ।